News » မြ သည် detective	15
ဇီဇီခင်ဇော် says: အများကြီးး ဖစ်နိုင်တာပဲ…
အောင်မြင်တဲ့ မယ် ရွေးပွဲများရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ချမ်းသာသော သထိန်းကြီးးများရှိ၏.. ဟိ…!! အတည်ပြောရရင်
မြစပဲရိုး says: အရီးကတော့ အဲဒီ လူကြီး ကို မျက်စိ စပါးမွှေးစူးနေတာမို့ သူ့ ပယောဂ မကင်းကို ထင်တာဘဲ။
kai says: လူတွေသိပ်စိတ်မ၀င်စားတော့တာမို့ပါ…။
မယုံရင်.. ဂီဂီ့မေးကြည့်…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6346
ဂီဂီ့ says: ဟုတ်ပ့
အဲဒါနဲ့ဘဲ ပို့စ်တစ်ပုဒ် တောင်ဖြစ်လို့။ သို့ပေမဲ့ အဲဒါဟာ တကယ်ဘဲ publicity stunt အတွက် ဆိုရင်တော့ စင်ပေါ်က မိန်းမ တွေ ကို စော်ကားတာဘဲ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အွန်းလေ.. ဒီလိုနိုင်ငံက.. ဒီလိုပွဲမျိုးမှာ.. ဒီလိုမှားတယ်ဆိုတာ..
မြစပဲရိုး says: ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိ။ အဲဒီလို Result ကို ပြောရတာ စာရွက် က For show တဲ့။
E.မြောက်မြောက် says: ဘားမှဟုတ်ဘူး
kai says: မေဘရဏီသော်ပြောတာကတော့.. သူတို့တွေမြင်နေရတဲ့… ဘုတ်မှာထိုးတာက.. အစကတည်းက.. မစ်စ်ဖိလစ်ပင်းတဲ့..။
E-မြောက်မြောက် says: ကိုလှန်ဘီယာကို တက်တက် စော်ဒကားဒါဘဲနေမှာ
Mike says: .ဖတ်ပြီးဘာမှမဝေဖန်တတ်လို့ အသာဇက်ပုပြီးပြန်ထွက်သွားပါဂျောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: တကယ်တော့ ပရန်ဆန်တာက မဖြစ်သင့်ဘူးလေ။ အခု နောက်ထပ် သတင်းတစ်ပုဒ်ထွက်နေတယ်။ ပရန်ဆန်တာက ကဒ်ကဟာကိုမကြည့်ဘဲ Photometer ကိုကြည့်မိတယ်ဆိုလား။ အဲ့မျာ ကိုလံဘီယာလို့ ပြထားပါသတဲ့။ တကယ်တော့ ပရန်ဆန်တာ မွှေတာပါ။ ဒိုနယ်ဒရန့်ကတော့ သူသာဆို
alinsett says: .ဖွေးဖွေးလို့ ကြေငြာပြီးမှ…ဒေါ်ဖွားမေပါ…ဆိုပြီး…အလုပ်ခံရလို့ကတော့…
ဦးကြောင်ကြီး says: အမ်တီမြက ကျောင်းသားသပ်မဂ မုန်းတီးရေးဝါဒီစိုဒေါ့ စုံထောက်မလှုပ်နဲ့ လုံထိန်းလှုပ်။